Kuwo wonke umuntu uphila mod, kodwa abantu musa njalo alivume. Ngisho noma umuntu ophika ukuthi unesithakazelo imfashini, noma kunjalo, uya yezitolo athenge izingubo zakhe anomuzwa wokuthi ukhululekile futhi elula. Akukho muntu ukuthenga into akakuthandanga.
Abesifazane kakhulu amadoda bayimilutha izitayela fashion nezitolo - lokhu kungenxa yezimo, igazi labo. Fashion imibukiso, omagazini, imodeli imfashini - lapha kusuka lokho abayikho obumangalisayo. Ezinye ukuthenga konke isendalini, abanye bathenga izingubo kuphela boutiques, kanti abanye bathenga izingubo izinto ngokusebenzisa izitolo inthanethi. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi ukuphi ukuthenga izingubo, kubalulekile ukwazi izinketho zakho, hhayi ukuthenga into, ukuthi ngaleso sikhathi ungenawo nalezet noma, kunalokho, bayaqhubeka bephila oyithandayo amanikiniki.
usayizi izingubo - kuba incwadi ethile noma ikhodi kwamanani eveza amagugu zomzimba womuntu noma izingxenye zayo, elenziwe futhi izingubo. Itholakala kwi amalebula kwezimpahla noma phezu insole uma kuba izicathulo.
Kunezinhlobo ezintathu eziyisisekelo izingubo Osayizi: S, M, L, eye yena, zihlukaniswe subtypes: XXS, XS, XL, XXL . Abesilisa nabesifazane banomthwalo nemingcele ezahlukene kulezi amagugu, ngaphezu, emazweni ahlukahlukene usebenzisa izinombolo ezahlukene ukwakhelwa yabo.
Umuntu ngamunye kalula pick out into elungile, njengoba kunoma yiliphi esitolo kukhona amatafula ngezimiso, noma kungabonwa amalebula izimpahla ngokwabo.
Emincane kakhulu yilezi ezilandelayo osayizi: usayizi S, XS futhi XXS. Lesi sakamuva alikhulumi nanokukhuluma abe notation eqondile. Ukuze owesibili yalezi Ubukhulu iduna nensikazi asetshenziselwa uhlelo singabantwana 42 no-44 ngokulandelana. Okuvame kakhulu kanti ethandwa kubhekwa usayizi S (44 nowesifazane, 46 wesilisa, ngokulandelana). Usayizi isilinganiso - M, it is hhayi ihlukaniswe sub-zinhlobo, njengeminye. okufushane lalaba kuyinto trazmer bendabuko 48, futhi abesifazane - 46. usayizi esikhulu kakhulu - kuyinto L, XL, XXL (abesifazane - 48, 50, 52, owesilisa - 50, 54, 56). Futhi, kwamanye amazwe zisebenzisa elithi XXXL ezigqokisa osayizi ngobukhulu.
Ngayinye yalezi abizwa liqukethe ulwazi mayelana ivolumu kanye sibalo womuntu. Ngokwesibonelo, cabanga ngobukhulu S. kuye owesifazane okufana imingcele zimi kanje: esifubeni girth ka 88 cm, hip obungazungeza 96 cm, futhi ukuphakama - 158 cm futhi usayizi M S: 92 cm esifubeni selilonke, okhalweni selilonke 80 cm, ukuphakama 164-170. cm, intamo girth abanikazi lokhu sayizi 39 cm.
Okungcono kakhulu, yebo, ngaphambi kokuthenga izinto uya ukugqoka kamuva, kuzame. Ngempela, kungenzeka ukuthi ngokuvamile engenzi ivumelane ngawe umbala noma isitayela. Uma ungazi ukuthi izilinganiso zakho, khona-ke thatha izinto ezimbalwa ngesikhathi esisodwa, noma xhumana ne-nabathengisi: zingabantu uqiniseke ukuze bakwazi ukukusiza. Kodwa uma uthenga izingubo umuntu njengesipho, odinga ukukwazi izilinganiso yale ndoda, hhayi ukuthi usephutheni nge ubukhulu. Indlela elula, uma kuyintando ejwayelekile - isibonelo, ubukhulu S. Ngesikhathi intando othembeke kunabo bonke, yebo, thatha umngane nawe esitolo okwesikhathi efanelekayo. Ungase futhi amnike ikhadi isaphulelo, kangangokuba wayengeke akhethe isipho ukuthi bathandile ngaphezulu.
Ukwazi nemingcele kanye namanani, awusoze uhambe okungalungile izingubo osayizi. Jabulela ngithenga yakho!
Izingubo izitayela bonke izikhathi
Downy ivesti wesilisa - stylish ucezu ikhabethe
Nakhichevan Autonomous Republic - i exclave of Azerbaijan
Zinnias Ebukekayo, indlela ukuqoqa imbewu lezi zimbali? Amacebo, Amathiphu